महा,बिर पुनको एकपछि अर्को च*मत्कार , नेपालमै कोरोना सँक्र*मितलाई खाना लगिदिने रो*बर्ट ! (भिडियो हेर्नुस) – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/महा,बिर पुनको एकपछि अर्को च*मत्कार , नेपालमै कोरोना सँक्र*मितलाई खाना लगिदिने रो*बर्ट ! (भिडियो हेर्नुस)
महा,बिर पुनको एकपछि अर्को च*मत्कार , नेपालमै कोरोना सँक्र*मितलाई खाना लगिदिने रो*बर्ट ! (भिडियो हेर्नुस)
4,765 Less thanaminute
राष्ट्रिय आ,विष्कार केन्द्रले कोरोना भा,इरस (कोभिड–१९) सं,क्रमितलाई खाना वा अन्य सामग्री पुर्‍याउनका लागि रोबाेट बनाउन सुरु गरेको छ । आइसोलेसन वार्डमा रहेका सं,क्रमित बिरामीलाई खाना पुर्‍याउने यो रोबाेट २–३ दिनभित्र तयार हुने आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले जानकारी दिए । ‘आइसोलेसनमा रहेका कोरोना सं,क्रमितका लागि खानासहित विभिन्न सामग्री पुर्‍याउने रोबाेट बनाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले पार्टपुर्जा जोड्ने काम भइरहेको छ । १/२ दिनभित्र हामी तयार गरिसक्छौँ ।’
सुरुवातमा परीक्षणका लागि एउटा रोबाेट बनाउन लागिएको आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले बताए । उनका अनुसार रोबाेट निर्माण भएपछि सैनिक अस्पताल छाउनीमा परीक्षण गरिनेछ । त्यस्तै, केन्द्रले कोरोना सं,क्रमितको उपचारका लागि थप २ काम पनि पूरा भएको जनाएको छ । केन्द्रले कोरोना सं,क्रमितका लागि आवयश्यक पर्ने एरोसोल बक्स र इमर्जेन्सी भेन्टिलेटर तयार भएको जनाएको हो । (भिडियो हेर्नुस)
सुरुवातमा परीक्षणका लागि एउटा रोबाेट बनाउन लागिएको आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले बताए । उनका अनुसार रोबाेट निर्माण भएपछि सैनिक अस्पताल छाउनीमा परीक्षण गरिनेछ । त्यस्तै, केन्द्रले कोरोना सं,क्रमितको उपचारका लागि थप २ काम पनि पूरा भएको जनाएको छ । केन्द्रले कोरोना सं,क्रमितका लागि आवयश्यक पर्ने एरोसोल बक्स र इ,मर्जेन्सी भेन्टिलेटर तयार भएको जनाएको हो । (भिडियो हेर्नुस)
माईतिघरमा तनावग्रस्त: MCC विरुद्ध प्रदर्शन गर्नेहरु माथी प्रहरीको लाठी, बुट र फोहोरा (भिडियो)
यति राम्री छोरी छोडेर श्रीमान अर्कै लिएर टाप कसेपछी | बिदेशमा लाएको माया नेपालमा यसरि अलपत्र [भिडियोसहित]
मेरो बिहे गर्ने उमेरमा ममी उल्टै हिड्नु भयो,ब्याचलर पढ़ने छोरी रुदै मिडियामा-(भिडियो हेर्नुहोस)
मन थामेर हेर्नुहोस बाध्यताले खाँ डी देशमा पुगेकी नेपाली चेलीको दर्दनाक (भिडियो)